Tirada dadka ku barakacay caalamka oo gaartay 55 milyan | Star FM
Home Caalamka Tirada dadka ku barakacay caalamka oo gaartay 55 milyan
Tirada dadka ku barakacay caalamka oo gaartay 55 milyan
Waxa sare u kacday tirada dadka ku barakacay gudaha wadamada kala duwan ee dunida oo gaartay 55 milyan oo qof.
Barakaca ka dhacay caalamka sanadkii hore ayaa lagu sheegay 40.5 milyan.
Xarunta dabagalka ku sameysa barakaca ee (IDMC) iyo golaha qaxootiga ee NRC ayaa maanta sheegay and the Norwegian Refugee Council (NRC) ayaa maanta sheegay in tiradan ay tahay midii ugu badnayd ee la diiwaangeliyo 10 sano gudahood.
Waxaa loo aaneeyay rabshado, dagaallo soo noqnoqtay iyo xaalado kale oo dabiici ah.
Previous articleDHAGEYSO:30 dugsi oo lagu xiray ismaamulka Nakuru